Qorshihii Wuu Dhammaaday - Arteta Oo Sheegay In Arsenal Ay Diyaar U Tahay Labada Daaqadood Ee Soo Socda Ineey Sameyso Saxiixyo Waaweyn.
HomeHoryaalka IngiriiskaQorshihii wuu dhammaaday – Arteta oo sheegay in Arsenal ay diyaar u tahay labada daaqadood ee soo socda ineey sameyso saxiixyo waaweyn.
Qorshihii wuu dhammaaday – Arteta oo sheegay in Arsenal ay diyaar u tahay labada daaqadood ee soo socda ineey sameyso saxiixyo waaweyn.
December 22, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Mikel Arteta oo ah tababaraha Arsenal ayaa ku adkeysanaya in kooxda ay qorsheyneyso labada daaqadood ee soo socda in isbedel xoogan lagu sameeyo safkiisa madaama natiijooyinka liita ay sameysay Fasal ciyaareedkkan waxana uu aamin sanyahay in kooxda ay kusoo noqon doonto boosaskii lagu yiqiinay.
Gunners ayaa ku dhibtooneysa booska 15aad ka dib markii ay aruursatay kaliya 14 dhibcood 14 kulan oo ay ciyaareen premier league xagaagan waxaana kaliya ay afar dhibcood ka sareeyaan Fulham oo ku jirta aagga u laabashada.
Ka hor kulanka Carabao Cup ee ay Manchester City kula ciyaarayaan garoonka Emirates Stadium Caawa Arteta ayaa sharraxay in agaasimaha farsamada ee Arsenal Edu uu lahaa qorshe uu ku horamarinayo kooxda halka isagu laftiisu uu eegi doono inuu horumariyo kooxdiisa.
Arteta oo ka hadlay xaalada kooxda ayaa yiri Shaqadaydu waa inaan ka faa’iideysto kooxdan ciyaartoyda aan heysano Waan ognahay waxa aan dooneyno inaan sameyno, waxaana isku dayi doonaa inaan fulino iyadoo aan ognahay in xaalada dhabta ah, suuqa iyo wixii aan soo marnay ay adkeynayaan.
Arsenal ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League iyadoo 7 guuldarro dusha loo saaray kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ayaa hoos uga dhacday miiska kala sarreynta horyaalka.